၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (5 of 7) – Dhamma Training Center
ပုရေ = ရှေးဦးစွာ၊ ဇာတ = ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပစ္စယ = အကြောင်းတရား။ ရှေးဦးကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်း တရားဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ Prenascence – condition တနည်း Born earlier ဟု ဘာသာပြန်ဆိုကြပါသည်။ ပုရေဇာတ Born earlierဟု ခေါ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ‘အကြောင်းတရားများက အကျိုးတရားမဖြစ်ပေါ်ခင် ရှေ့က ဖြစ်နှင့်သော ကြောင့်တည်း’။
(က) အကြောင်းတရားက အကျိုးတရားမဖြစ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပုရေဇာတပစ္စည်း Born earlier တစ်နည်း Prenascence – condition
(ခ ) အကျိုးတရားက အကြောင်းတရားမဖြစ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်း- Born earlier တစ်နည်း Prenascence – condition
(ဂ ) အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရား ပြိုင်တူဖြစ်သည့် သဟဇာတပစ္စည်း။ Conascence- condition တနည်း Born together.
ပုရေဇာတပစ္စည်း၏ သင်္ချာမှာ – ၃ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘ပုရေဇာတေ တီဏိ’ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည် –
(၁) ဗျာ – ဗျာ (၂) ဗျာ – ကု (၃) ဗျာ – အကု
ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် ၁-၀တ္ထုပုရေဇာတနှင့် ၂-အာရမ္မဏပုရေဇာတဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ၀တ္ထုပုရေဇာတကို လေ့လာရာတွင် ၁-စက္ခုဝတ္ထု၊ ၂-သောတ၀တ္ထု၊ ၃-ဃာန၀တ္ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ၅-ကာယ၀တ္ထု၊ ၆-ဟဒယ၀တ္ထုတို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားထားရပါမည်။
အာရမ္မဏပုရေဇာတကို လေ့ရာတွင် ၁-ရူပါရုံ အဆင်း၊ ၂-သဒ္ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန္ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့တို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားမိရန် လိုပေသည်။
မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန် တည်ရာမှီရာ Base အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ၀တ္ထုပုရေဇာတ။ မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အာရုံ Object အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို အာရမ္မဏပုရေဇာတ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် နား၊ နှာခေါင်း၌ ကြားသိစိတ် နံသိစိတ်တို့ကိုလည်း အလားတူ နားလည်ရပါမည်။
ပုရေဇာတပစ္စည်း၏ သင်္ချာမှာ-၃ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘ပုရေဇာတေ တီဏိ’ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည် –
(၁) ဗျာ-ဗျာ (၂)ဗျာ-ကု (၃)ဗျာ-အကု
ဤတွင် ၀တ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်း၏ ထူးခြားချက်မှာ တည်ရာ မှီရာ Base က Born earlier. ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်ပြီး ကျေးဇူးပြုပါသည် (၀ါ) ဖြစ်စေပါသည်။ ဥပမာ- အဆင်းကိုမြင်ရန် စက္ခုဝတ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရသည်။ အသံကို ကြားရန် သောတ၀တ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရပါသည်။
ပဥှာဝါရ၌ “ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော” ဟုလည်းကောင်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော်၌ “စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ပုရေဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော”ဟု လာရှိပါသည်။ စက္ခုပသာဒ (၀ါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် စက္ခုဝိညာဏဓာတ် (မြင်သိစိတ်)ကို ပုရေဇာတပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏ဟု အဓိပ္ပါယ်ရရှိ ပါသည်။
မျက်စိအကြည် စက္ခုပသာဒ (၀ါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် ရုပ်သက်၊ နာမ်သက်များ၏ သဘာဝနိယာမအတိုင်း ဥပါဒ်၊ ဋ္ဌီ၊ ဘင် Process ထဲမှ ဖြစ် တည် ပျက်၍၊ ဖြစ် တည် ပျက်၍ သွားနေပါသည်။ ဤတွင် Born earlier.တင်ကြို၍ ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုရာ၌ မိမိတို့သိမှတ်နိုင်သည့် အချိန်ကာလအားဖြင့် နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ နာရီ မည်မျှ တင်ကြို ဖြစ်ရသနည်း ဟူသောမေးခွန်း ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။
၁၀။ ပုရဇောတပစ်စယော PYIDAUNGSU-UNICODE
ပုရေ = ရှေးဦးစှာ၊ ဇာတ = ဖွဈပျေါခွငျး၊ ပစ်စယ = အကွောငျးတရား။ ရှေးဦးကွိုတငျဖွဈပျေါသညျ့ အကွောငျး တရားဟု အဓိပ်ပါယျရပါသညျ။ Prenascence – condition တနညျး Born earlier ဟု ဘာသာပွနျဆိုကွပါသညျ။ ပုရဇောတ Born earlierဟု ချေါရသညျ့အကွောငျးမှာ ‘အကွောငျးတရားမြားက အကြိုးတရားမဖွဈပျေါခငျ ရှကေ့ ဖွဈနှငျ့သော ကွောငျ့တညျး’။
(က) အကွောငျးတရားက အကြိုးတရားမဖွဈခငျ ရှကေ့ဖွဈနှငျ့သညျ့ ပုရဇောတပစ်စညျး Born earlier တဈနညျး Prenascence – condition
(ခ ) အကြိုးတရားက အကွောငျးတရားမဖွဈခငျ ရှကေ့ဖွဈနှငျ့သညျ့ ပစ်ဆာဇာတပစ်စညျး- Born earlier တဈနညျး Prenascence – condition
(ဂ ) အကွောငျးတရားနှငျ့ အကြိုးတရား ပွိုငျတူဖွဈသညျ့ သဟဇာတပစ်စညျး။ Conascence- condition တနညျး Born together.
ပုရဇောတပစ်စညျး၏ သင်ျခြာမှာ – ၃ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘ပုရဇောတေ တီဏိ’ဟု မှတျသားနိုငျပါသညျ။ ထိုသင်ျခြာကို အောကျပါအတိုငျး လလေ့ာနိုငျပါသညျ –
ပုရဇောတပစ်စညျးတှငျ ၁-ဝတ်ထုပုရဇောတနှငျ့ ၂-အာရမ်မဏပုရဇောတဟူ၍ နှဈမြိုးရှိပါသညျ။ ဝတ်ထုပုရဇောတကို လလေ့ာရာတှငျ ၁-စက်ခုဝတ်ထု၊ ၂-သောတဝတ်ထု၊ ၃-ဃာနဝတ်ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ်ထု၊ ၅-ကာယဝတ်ထု၊ ၆-ဟဒယဝတ်ထုတို့ကို ဦးစှာ မှတျသားထားရပါမညျ။
အာရမ်မဏပုရဇောတကို လရေ့ာတှငျ ၁-ရူပါရုံ အဆငျး၊ ၂-သဒ်ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန်ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ်ဌဗ်ဗာရုံ အထိအတှတေို့ကို ဦးစှာ မှတျသားမိရနျ လိုပသေညျ။
မွငျသိစိတျ စက်ခုဝိညာဏဖွဈပျေါလာနိုငျရနျ တညျရာမှီရာ Base အဖွဈ ကြေးဇူးပွုခွငျးကို ဝတ်ထုပုရဇောတ။ မွငျသိစိတျ စက်ခုဝိညာဏ ဖွဈပျေါလာနိုငျရနျအာရုံ Object အဖွဈ ကြေးဇူးပွုခွငျးကို အာရမ်မဏပုရဇောတ ဖွဈပါသညျ။ ကနျြသညျ့ နား၊ နှာခေါငျး၌ ကွားသိစိတျ နံသိစိတျတို့ကိုလညျး အလားတူ နားလညျရပါမညျ။
ပုရဇောတပစ်စညျး၏ သင်ျခြာမှာ-၃ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘ပုရဇောတေ တီဏိ’ဟု မှတျသားနိုငျပါသညျ။ ထိုသင်ျခြာကို အောကျပါအတိုငျး လလေ့ာနိုငျပါသညျ –
(၁) ဗြာ-ဗြာ (၂)ဗြာ-ကု (၃)ဗြာ-အကု
ဤတှငျ ဝတ်ထုပုရဇောတပစ်စညျး၏ ထူးခွားခကျြမှာ တညျရာ မှီရာ Base က Born earlier. ကွိုတငျဖွဈနှငျ့ပွီး ကြေးဇူးပွုပါသညျ (ဝါ) ဖွဈစပေါသညျ။ ဥပမာ- အဆငျးကိုမွငျရနျ စက်ခုဝတ်ထုကို အမှီပွုပွီး ဖွဈရသညျ။ အသံကို ကွားရနျ သောတဝတ်ထုကို အမှီပွုပွီး ဖွဈရပါသညျ။
ပဥှာဝါရ၌ “ရူပါယတနံ စက်ခုဝိညာဏဿ ပုရဇောတပစ်စယနေ ပစ်စယော” ဟုလညျးကောငျး ပစ်စယနိဒ်ဒသေ ပါဠိတျော၌ “စက်ခာယတနံ စက်ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ်ပယုတ်တကာနဉ်စ ဓမ်မာနံ ပုရဇောတ ပစ်စယနေ ပစ်စယော”ဟု လာရှိပါသညျ။ စက်ခုပသာဒ (ဝါ) စက်ခုဝတ်ထုသညျ စက်ခုဝိညာဏဓာတျ (မွငျသိစိတျ)ကို ပုရဇောတပစ်စညျးဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏ဟု အဓိပ်ပါယျရရှိ ပါသညျ။
မကျြစိအကွညျ စက်ခုပသာဒ (ဝါ) စက်ခုဝတ်ထုသညျ ရုပျသကျ၊ နာမျသကျမြား၏ သဘာဝနိယာမအတိုငျး ဥပါဒျ၊ ဋ်ဌီ၊ ဘငျ Process ထဲမှ ဖွဈ တညျ ပကျြ၍၊ ဖွဈ တညျ ပကျြ၍ သှားနပေါသညျ။ ဤတှငျ Born earlier.တငျကွို၍ ဖွဈရသညျဟုဆိုရာ၌ မိမိတို့သိမှတျနိုငျသညျ့ အခြိနျကာလအားဖွငျ့ နှဈ၊ လ၊ ရကျ၊ နာရီ မညျမြှ တငျကွို ဖွဈရသနညျး ဟူသောမေးခှနျး ပျေါပေါကျလာပါသညျ။